Vakuru vechiKristu ‘Vanoshanda Pamwe Nesu Kuti Tifare’ | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Malagasy Malay Maltese Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uzbek Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Tiri vashandi pamwe chete nemi kuti mufare.”—2 VAK. 1:24.
TSVAKA MHINDURO DZEMIBVUNZO IYI:
Pauro akaratidza sei kuti aisava ‘tenzi wokutenda kwehama dzake’ asi kuti ‘aishanda pamwe chete nadzo kuti dzifare’?
Vakuru vechiKristu vanobatsira sei hama dzavo kuti dzifare?
Tose zvedu tingaitei kuti ungano ifare?
1. Chii chakaita kuti Pauro afarire vaKristu vokuKorinde?
MAIVA mugore ra55 C.E. Muapostora Pauro aiva muguta reTroasi raiva nechiteshi chezvikepe, asi pfungwa dzaiva kuKorinde. Gore iroro richitanga, ainge arwadziwa paakaziva kuti hama dzokuKorinde dzaipopotedzana. Saka sezvinoita baba vane hanya, ainge atumira tsamba kuti avaruramise. (1 VaK. 1:11; 4:15) Ainge atumawo Tito waaishanda naye kwavari uye ainge aronga kuti adzoke neshoko kuTroasi. Panguva iyi Pauro ainge akamirira Tito muTroasi, achida kunzwa kuti zvinhu zvainge zvakamira sei kuKorinde? Asi Pauro akaodzwa mwoyo chaizvo Tito paasina kusvika. Pauro akaitei? Akaenda nechikepe kuMakedhoniya, uye akafara chaizvo nokuti vakasangana ikoko. Tito akatsanangura kuti hama dzokuKorinde dzainge dzateerera zano retsamba yaPauro uye kuti dzaisuwa kumuona. Pauro paakanzwa mashoko iwayo akanaka, ‘akafarazve.’—2 VaK. 2:12, 13; 7:5-9.
2. (a) Pauro akanyorera hama dzokuKorinde kutii nezvekutenda uye mufaro? (b) Tichakurukura mibvunzo ipi?
2 Pasina nguva, Pauro akanyorera hama dzokuKorinde tsamba yechipiri. Akavaudza kuti: “Kwete kuti tiri vanatenzi vokutenda kwenyu, asi tiri vashandi pamwe chete nemi kuti mufare, nokuti makamira nokutenda kwenyu.” (2 VaK. 1:24) Pauro airevei nemashoko iwayo? Uye anofanira kuita kuti vakuru vechiKristu vaitei mazuva ano?
KUTENDA KWEDU UYE MUFARO WEDU
3. (a) Pauro airevei paakanyora kuti: “Makamira nokutenda kwenyu”? (b) Mazuva ano vakuru vanotevedzera sei Pauro?
3 Pauro akataura zvinhu zviviri zvinokosha pakunamata kwedu, kutenda uye mufaro. Yeuka kuti nezvekutenda, akanyora kuti: “Kwete kuti tiri vanatenzi vokutenda kwenyu, . . . nokuti makamira nokutenda kwenyu.” Nemashoko aya, Pauro akabvuma kuti hama dzokuKorinde dzainge dzakamira, kwete pamusana pake kana kuti chero mumwe munhu, asi pamusana pokutenda kwadzo muna Mwari. Saka Pauro akaona pasina chikonzero chokuti nangananga nokutenda kwehama dzake, uye aisava nechido chokuita izvozvo. Aiva nechivimbo chokuti vaiva vaKristu vakatendeka vaida kuita zvakarurama. (2 VaK. 2:3) Mazuva ano, vakuru vanotevedzera Pauro nokuratidza kuti vane chivimbo nokutenda kwehama dzavo uye vavariro dzavo dzokushumira Mwari. (2 VaT. 3:4) Pane kudzika mitemo yavo muungano, vakuru vanoshandisa mazano nemirayiro zvinobva kusangano raJehovha. Vakuru vemazuva ano havasi vanatenzi vokutenda kwehama dzavo.—1 Pet. 5:2, 3.
4. (a) Pauro airevei paakanyora kuti: “Tiri vashandi pamwe chete nemi kuti mufare”? (b) Mazuva ano vakuru vanotevedzera sei mafungiro aPauro?
4 Pauro akatiwo: “Tiri vashandi pamwe chete nemi kuti mufare.” Nemashoko iwayo, aitaura nezvake uye shamwari dzake dzepedyo dzaaishanda nadzo kubatsira vaKorinde. Nei tichidaro? Nokuti mutsamba iyoyo, Pauro akayeuchidza hama dzokuKorinde nezvedzimwe shamwari dzacho mbiri paakanyora kuti: “Jesu . . . akaparidzwa pakati penyu nesu, kureva ini naSirivhano naTimoti.” (2 VaK. 1:19) Uyezve, pose Pauro paaishandisa mashoko okuti “vashandi pamwe chete” mutsamba dzake, ainge achitaura shamwari dzake dzepedyo, dzakadai saAporo, Priska, Akwira, Timoti, Tito, nevamwe. (VaR. 16:3, 21; 1 VaK. 3:6-9; 2 VaK. 8:23) Saka paakati: “Tiri vashandi pamwe chete nemi kuti mufare,” Pauro akavimbisa hama dzokuKorinde kuti iye nevamwe vake vaida kuita zvose zvavaigona kuti vanhu vose vomuungano iyoyo vafare. Mazuva ano, vakuru vechiKristu vane chido chakadaro. Vanoda kuita zvose zvavanogona kubatsira hama dzavo ‘kushumira Jehovha dzichifara.’—Pis. 100:2; VaF. 1:25.
5. Tichakurukura mhinduro dzakapiwa pamubvunzo upi uye tinofanira kufungisisei?
5 Munguva pfupi yapfuura, hama nehanzvadzi dzinoshingaira dzinobva kwose kwose munyika dzakabvunzwa kuti, “Mashoko api uye zvakaitwa nomukuru zvakawedzera mufaro wenyu?” Iye zvino patinenge tichikurukura mhinduro dzehama dzedu idzodzo, ona kuti zvadzakataura zvinoenderana here nezvaungadai wakapindura. Uyezve, tose zvedu ngatifungisisei kuti tingabatsira sei kuti ungano yedu ive nomufaro. *
“KWAZISAI PESISI ANODIWA WEDU”
6, 7. (a) Ndeipi imwe nzira iyo vakuru vangatevedzera Jesu, Pauro, uye vamwe vashumiri vaMwari? (b) Nei kuyeuka mazita ehama dzedu kuchiwedzera mufaro wadzo?
6 Vakawanda pahama nehanzvadzi dzedu vanoti mufaro wavo unowedzera vakuru pavanoratidza kuvafarira. Imwe nzira inokosha iyo vakuru vanoita izvozvo ndeyokutevedzera Dhavhidhi, Erihu, uye Jesu pachake. (Verenga 2 Samueri 9:6; Jobho 33:1; Ruka 19:5.) Mumwe nomumwe wevashumiri ava vaJehovha akanyatsoratidza kufarira mumwe munhu nokushandisa zita romunhu wacho. Pauro ainzwisisawo kukosha kwokuyeuka uye kushandisa mazita evaainamata navo. Akagumisa imwe yetsamba dzake nokukwazisa hama nehanzvadzi dzinopfuura 25 nemazita adzo, kusanganisira Pesisi, muKristu waakati nezvake: “Kwazisai Pesisi anodiwa wedu.”—VaR. 16:3-15.
7 Vamwe vakuru vanoomerwa chaizvo nokuyeuka mazita. Kunyange zvakadaro, pavanonyatsoedza kudaro, zvinoita sokuti vari kuudza hama dzavo kuti, ‘Munokosha kwandiri.’ (Eks. 33:17) Hama dzichawedzera kufara kana vakuru vakadzidoma nemazita kuti dzipindure paChidzidzo cheNharireyomurindi kana mimwe misangano.—Enzanisa naJohani 10:3.
“AKAITA MABASA MAZHINJI MUNASHE”
8. Pauro akatevedzera Jehovha naJesu pachinhu chipi chinokosha?
8 Pauro akaratidzawo kunyatsofarira vamwe nokuvarumbidza, uye iyoyo ndiyo imwe nzira inokosha yokuwedzera nayo mufaro wehama dzedu. Saka mutsamba imwe chete iyoyo maakataura nezvechido chake chokushanda kuti hama dzake dzifare, Pauro akanyora kuti: “Ndinozvirumbidza kwazvo pamusoro penyu.” (2 VaK. 7:4) Mashoko iwayo okurumbidza anofanira kuva akafadza chaizvo hama dzemuKorinde. Pauro akaudza dzimwe ungano mashoko akada kudaro. (VaR. 1:8; VaF. 1:3-5; 1 VaT. 1:8) Pashure pokunge ataura zita raPesisi mutsamba yaakanyorera ungano yekuRoma, Pauro akawedzera kuti: “Akaita mabasa mazhinji munaShe.” (VaR. 16:12) Mashoko iwayo okurumbidza anofanira kuva akafadza chaizvo hanzvadzi iyoyo yakatendeka! Pauro aitevedzera Jehovha naJesu pakurumbidza vamwe.—Verenga Mako 1:9-11; Johani 1:47; Zvak. 2:2, 13, 19.
9. Nei kurumbidza vamwe kuchiita kuti ungano ifare?
9 Mazuva ano vakuru vanoonawo kukosha kwokuudza hama dzavo kuti vanoonga zvadzinoita. (Zvir. 3:27; 15:23) Pose apo mukuru anoita izvozvo, anoita seari kuudza hama dzake kuti: ‘Ndaona zvamaita. Ndine hanya nemi.’ Uye zvechokwadi hama dzinoda chaizvo kunzwa mashoko evakuru anokurudzira. Imwe hanzvadzi ine makore ari kuma55 yakataura manzwiro evakawanda payakati: “Kubasa kashoma kuwana anokutenda. Vanhu havana rudo uye vanokwikwidzana. Saka mukuru paanonditenda pamusana pezvandinenge ndaitira ungano, zvinondikurudzira chaizvo, zvinondipa simba! Zvinoita kuti ndinzwe ndichidiwa naBaba vangu vokudenga.” Imwe hama isina mudzimai iri kurera vana vaviri ine manzwiro akaita saiwayo. Munguva pfupi yapfuura mumwe mukuru akairumbidza zvichibva pamwoyo. Hama yedu yakanzwa sei? Inoti: “Mashoko emukuru iyeye akandikurudzira chaizvo!” Zvechokwadi, kana mukuru akarumbidza hama dzake zvichibva pamwoyo, dzinobva dzawedzera kufara. Izvozvo zvinodziwedzerawo simba rokuramba dzichifamba mumugwagwa wokuupenyu ‘dzisinganeti.’—Isa. 40:31.
‘FUDZAI UNGANO YAMWARI’
10, 11. (a) Vakuru vangatevedzera sei Nehemiya? (b) Chii chichabatsira mukuru kuti ape vamwe chipo chomudzimu paanenge achifudza?
10 Ndeipi nzira inonyanya kukosha iyo vakuru vanoratidza nayo kufarira hama dzavo uye inowedzera mufaro weungano? Ndeyokutora danho rokukurukura nevaya vanoda kukurudzirwa. (Verenga Mabasa 20:28.) Vakuru pavanoita izvozvo, vanotevedzera vafudzi vemunguva yekare. Somuenzaniso, ona zvakaitwa nomutariri akatendeka Nehemiya, paakaona kuti dzimwe hama dzake dzechiJudha dzainge dzaneta pakunamata. Nyaya yacho inotaura kuti akabva asimuka, akadzikurudzira. (Neh. 4:14) Mazuva ano, vakuru vanofanirawo kuita izvozvo. ‘Vanosimuka’ kana kuti vanotora danho rokubatsira hama dzavo kuti dzive nokutenda kwakasimba. Kuti vakurudzire vamwe saizvozvo, vanoshanyira hama nehanzvadzi mudzimba dzavo kana zvichiita. Pavanenge vachifudza vamwe, chido chinofanira kuva ‘chokuvapa chipo chomudzimu.’ (VaR. 1:11) Chii chichabatsira vakuru kuita izvozvo?
11 Asati aenda kunofudza, mukuru anofanira kuwana nguva yokufunga nezvemunhu waachashanyira. Munhu wacho ane matambudziko api? Ipfungwa dzipi dzingamusimbisa? Rugwaro rupi kana zvakaitika kune mumwe munhu anotaurwa muBhaibheri zvingashanda kwaari? Mukuru akagara afunga izvozvo, zvichamubatsira kukurukura zvine musoro, kwete tunyaya twenhando. Paanenge achifudza, mukuru anorega hama dzake nehanzvadzi dzichitaura iye akanyatsoteerera. (Jak. 1:19) Imwe hanzvadzi yakati: “Zvinonyaradza chaizvo mukuru paanoteerera nomwoyo wose.”—Ruka 8:18.
Kugadzirira kunobatsira mukuru ‘kupa vamwe chipo chomudzimu’ paanenge achifudza
12. Muungano ndivanaani vanoda kukurudzirwa, uye nei?
12 Ndivanaani vangabatsirwa nokufudzwa? Pauro akarayira vakuru vechiKristu kuti ‘vachenjerere boka rose.’ Chokwadi, vose vari muungano vanoda kukurudzirwa, kusanganisira mapiyona nevaparidzi vave vachiita ushumiri hwavo vakatendeka kwemakore akawanda. Nei vachida kutsigirwa nevafudzi pane zvokunamata? Nokuti dzimwe nguva vanhu vakadaro vakasimba pakunamata vanogona kungokundwa nematambudziko anokonzerwa nenyika ino yakaipa. Somuenzaniso, kuti tione chinoita kuti dzimwe nguva mushumiri waMwari akasimba ade rubatsiro rwevamwe, ngatikurukurei zvakamboitika kuna Mambo Dhavhidhi.
‘ABHISHAI AKABATSIRA DHAVHIDHI’
13. (a) Ishbhi-bhenobhu akada kuuraya Dhavhidhi zvaita sei? (b) Abhishai akakwanisa sei kununura Dhavhidhi?
13 Nguva pfupi wechiduku Dhavhidhi azodzwa kuti ave mambo, akamirisana naGoriyati, mumwe wevaRefaimu, rudzi rwehofori. Dhavhidhi aiva noushingi akauraya hofori yacho. (1 Sam. 17:4, 48-51; 1 Mak. 20:5, 8) Papfuura makore, pavairwisana nevaFiristiya, Dhavhidhi akamirisanazve neimwe hofori yainzi “Ishbhi-bhenobhu,” uye yaivawo mumwe wevaRefaimu. (2 Sam. 21:16) Asi panguva ino, hofori yacho yakapotsa yauraya Dhavhidhi. Nemhaka yei? Yaisava mhosva yokuti Dhavhidhi ainge asisina kushinga asi kuti ainge aneta. Nyaya yacho inoti: “Dhavhidhi akaneta.” Ishbhi-bhenobhu paakangoona kuti Dhavhidhi aneta, “akafunga zvokuuraya Dhavhidhi.” Asi hofori yacho payainge yava kuda kubaya Dhavhidhi, “Abhishai mwanakomana waZeruya akabva abatsira Dhavhidhi, akawisira muFiristiya wacho pasi, akamuuraya.” (2 Sam. 21:15-17) Chokwadi akapona nepaburi retsono! Dhavhidhi anofanira kuva akatenda chaizvo kuti Abhishai akaramba achiona kuti zvinhu zvaimufambira sei uye kuti akakurumidza kumubatsira paainge ava panyatwa! Tingadzidzei panyaya iyi?
14. (a) Tinokwanisa sei kukunda zvipingamupinyi zvakakura zvingafananidzwa naGoriyati? (b) Vakuru vangabatsira sei vamwe kuti vawanezve simba uye mufaro? Taura muenzaniso.
14 Munyika yose, isu vanhu vaJehovha tiri kuita ushumiri hwedu pasinei nezvipingamupinyi zvatiri kuisirwa munzira naSatani nevashandi vake. Vamwe vedu takasangana nezvipingamupinyi zvakakura zvatingafananidza nehofori Goriyati, asi takazvikunda nokuti takanyatsovimba naJehovha. Zvisinei, dzimwe nguva, kugara tichirwisana nematambudziko enyika ino kunotipedza simba uye kunotiodza mwoyo. Takaneta kudaro, tinenge tiri pangozi yokukundwa nematambudziko ataigona kukunda pane imwe nguva. Pakadaro, rubatsiro rwatinopiwa nemukuru runogona kutibatsira kufarazve uye kuva nesimba, sezvakaitika kune vakawanda. Mumwe piyona ane makore okuma65 akati: “Pane imwe nguva, ndaisanzwa zvakanaka, uye ushumiri hwaindinetesa. Mumwe mukuru akaona kuti ndaisava nesimba uye akauya kuzotaura neni. Takakurukura ndima yemuBhaibheri inokurudzira. Ndakashandisa mazano aakandipa, uye akandibatsira.” Akawedzera kuti: “Mukuru iyeye akaratidza rudo zvechokwadi paakaona kuti ndainge ndaneta akandibatsira!” Chokwadi zvinokurudzira kuziva kuti tine vakuru vanogara vachiona kuti zvinhu zviri kutifambira sei, uye vakagadzirira ‘kutibatsira’ sezvakaitwa naAbhishai.
‘ZIVAI KUKUDAI KWANDINOITA’
15, 16. (a) Nei Pauro aidiwa chaizvo nehama dzake? (b) Nei tichifanira kuratidza rudo kuvakuru veungano?
15 Kuva mufudzi ibasa chairo. Dzimwe nguva vakuru havarari vachifunga uye vachinyengeterera makwai aMwari kana kuti vachitsigira hama dzavo pane zvokunamata. (2 VaK. 11:27, 28) Kunyange zvakadaro, vakuru vanonyatsoita basa ravo vachifara sezvaiita Pauro. Akanyorera vaKorinde kuti: “Ndichafara kwazvo kushandisa zvinhu zvose uye kushandiswa zvizere nokuda kwemweya yenyu.” (2 VaK. 12:15) Chokwadi, Pauro akanyatsozvishandisa pakusimbisa hama dzake nokuti aidzida. (Verenga 2 VaKorinde 2:4; VaF. 2:17; 1 VaT. 2:8) Saka hazvishamisi kuti hama dzaida chaizvo Pauro!—Mab. 20:31-38.
16 Mazuva ano, isu vashumiri vaMwari tinodawo vakuru vechiKristu uye tinotenda Jehovha muminyengetero yedu kuti akatipa vakuru ava. Vanowedzera mufaro wedu nokuratidza kuti vanotifarira. Pavanotishanyira kuzotifudza, tinokurudzirwa. Uyezve, tinotenda kuti vanogara vakagadzirira kutibatsira patinenge tava kukundwa nematambudziko enyika ino. Chokwadi, vakuru vechiKristu vakadaro ‘vanoshanda pamwe chete nesu kuti tifare.’
^ ndima 5 Hama idzodzo nehanzvadzi dzakabvunzwawo kuti, “Unhu hupi hwamunonyanya kukoshesa pamukuru?” Ruzhinji rwakapindura kuti, “Kuva munhu anotaurika naye.” Unhu ihwohwo hunokosha huchakurukurwa muNharireyomurindi ichauya.